မလော်ပါ – ဒေါ်နီနီဒွန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Interviews & Profiles » မလော်ပါ – ဒေါ်နီနီဒွန်း
Posted by မြစပဲရိုး on Sep 13, 2015 in Interviews & Profiles | 14 comments
ကျွန်မ သူ့ကို လော်စရာ မလိုပါ။
သွားလော်လိုက်ရင်တောင် သူ့ နယ်ကသူ တွေ က သူတို့လောက်တောင် သိလို့လား လို့ ပြန်မေးကြမှာ။
ကျွန်မ ချစ်သူငယ်ချင်း “နီနီဒွန်း” က ငယ်ဘဝ မှာ သူ့ကျောင်း က “လသာ (၂)” ပါ။ သူငယ်တန်း ကနေ ဒသမတန်း ထိပေါ့။
ချစ် အစ်မဒုံ တို့ ချစ်မမ တို့ ရဲ့ ညီမတော်ပေါ့။ သူလဲ အပျိုကြီး ပါဘဲ။
. နောက်တော့ စီးပွါရေးတက္ကသိုလ် က ဘီကွမ်း ဘွဲ့ ရပါတယ်။
. ကျောင်းပြီးတာ နဲ့ သူ့ အမေ ဆေးခန်း ရှိရာ အရပ် “ပေါက်ခေါင်းမြို့” ကို ပြန်ပြီး အဲဒီ အရပ်က လူ တွေ အတွက် သူ့ဘဝ နှစ်ထားခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါး ရှိပါပေါ့။
သူ့အဖေက “ဦးစောနေဒွန်း” နဲ့ အမေက “ဒေါက်တာ ဒေါ်သန်းခင်ပါ”။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်း က သူ့တို့နယ် တစ်ဝိုက်မှာ NLD အတွက် အားကြိုးမာန်တက် မဲဆွယ်ပေးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အဆင့်ဆင့်တက်ပြီး လက်ရှိမှာ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် ရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္က္ကဌ တာဝန်ယူထားသူပါ။
သူ့ရဲ့ ရိုးသားမှု၊ ကြိုးစားမှု၊ မာန်မာနကင်းမှု၊ ကိုယ့်ကျိုးအတ္တ နဲ ပြီး အများအကျိုးကို ဆောင်ရွက်လိုမှု တွေ အားလုံး ဟာ မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်ပါတယ်။
သူ့ဘဝကို ပိုတိုးတက် အောင်မြင်ဖို့ထက် သူ့ရပ်ရွာက ကလေးတွေ ၊ လူအိုတွေ အပါအဝင် လူသား အားလုံး အကျိုးအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆောင်ရွက်နေသူပါ။
လက်ရှိကိုကြည့်ရင်တော့ သူ့ရပ်ရွာလေးဟာ အရင်ကထက်တောင် ပိုပိုတောင် ဆင်းရဲနွမ်းပါး နေပါတယ်။
အဲဒီ ရပ်ရွာ အတွက် ဘတ်ဂျက် ဆိုတာ ဘယ်သူ့ အိတ်ကပ် ထဲ ရောက်ခဲ့လဲ။ ဘယ်သူပြောနိုင်ပါ့မလဲ။
အဲဒီ မတရားမှု က နေ လွတ်အောင် သူမဟာ အားကောင်းတဲ့ “ခွပ်ဒေါင်း” အဖြစ် နဲ့ တိုက်ပွဲ ဝင်နေရဆဲပါ။
. ရွေးကောက်ပွဲ အလွန်မှာတော့ အဲဒီ “ခွပ်ဒေါင်း” ကနေ ပိုမို တင့်တယ် တဲ့ “ကဒေါင်း” အသွင် နဲ့ သူချစ် တဲ့ ရပ်ရွာအကျိုး ကို အစွမ်းရှိရှိ သယ်ပိုးပေးနိုင်မယ် ယုံကြည်ပါတယ်။
အဲဒီ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် အပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံး မှာ “ခွပ်ဒေါင်း” လေးများ ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင်နိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့ အားလုံး ဒီရက်ပိုင်းလေး တတ်နိုင်သမျှ ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးပေးကြပါစို့။
(PS – သူ့ ကို သတိရခြင်း၊ ချစ်ခြင်းများစွာ နဲ့ သူ့ ဓာတ်ပုံ တွေ ကို မရ မက ရအောင်ရှာပြီး အားပေးနေတဲ့
ဟိုး အဝေးက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အကြောင်း ကို သူ ကတော့ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါလေ)
ဒေါ်နီနီဒွန်း (B.Com – Yangon Institute of Economics) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
N L D နာယက ဘဘဦးတင်ဦးနှင့် ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်တို့၏ လူထုဟောပြောပွဲတက်ရောက်စဉ်။
ဒီလို စွပ်ကျယ် မျိုး ကို ဝတ်နေရတာ မြန်မာပြည် ထဲ ဘယ်လောက်များ မယ် ကျွန်မ မှန်းကြည့်နေမိတယ်။ ဒီလောက် ချို့တဲ့ နေတဲ့ လူတွေ များတဲ့ မြေမှာ အရမ်းတန်ဖိုးကြီး တဲ့ အဝတ် ဝတ်ထားရတာ ကို ကျွန်မတို့ ရှက်သင့်ပါတယ်။
သူကတော့ အနာဂါတ်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်အတွက်တာဝန်ကျေခဲ့ပြီ။ အားလုံး တာဝန်ကျေကြစို့နော်။
အဟဲ – ဒါကတော့ သူလဲ ငယ်တုန်း က အင်မတန် ချစ်ဖို့ ကောင်းသူ တစ်ယောက်ပါ လို့စ်။ :-)))
တိုက်ပွဲ ဝင် ခွပ်ဒေါင်း ကိုပဲ ကြိုက်တယ်။
မန်းလေးကနေ ဝံအရွေးခံမည့် နေဇင်လတ် မြန်တျန့်တိုတက်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ် windtalker (ခ) မောင်ပေအတွက်လည်း စည်းရုံးပေးပါခမြှာ…။ လေကျီးမိုးကျီး ဂဇွတ်ရွာမှာ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ရှိမှာဆိုလို သူတျောက်ပဲ မြင်လို့ပါ။
ပေးဘူး …အရီးကို ပေးမလို့ စောင့်နေတာ….. စတာပါ အရီး .. ကျွန်တော့်မြို့  နယ် မဟုတ်လို့ပါ …
ကျွန်တော့်မြို့ နယ်က NLD
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက ဘယ်လိုလူမျိူးဆိုတာ ခုထိ သိသေးဘူး .. သူတို့ပြောသလို နုနုရွရွလေး
တွေ မဟုတ်လို့ လော်ဘီ မလုပ် လို့လားတော့ သိဘူး.. လိုက်ရှာကြည့်နေတာ တော့ ခုထိ တွေ့သေးဘူး
နံမည်က တော့ ဦးအောင်အောင်စိုး ဆိုလား ..
သူ့ပြိုင်ဖက်.. ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ဘယ်သူလည်းသိမှ.. ပိုကောင်းမယ်ထင်မိတယ်…။
ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ.. မဲတွေ.. ကောက်သင်းကောက်လိုက်သိမ်းယူနေဖို့မလို.. ယှဉ်ပြိုင်ဖက်.. အတိုက်အခံကိုအနိုင်ချယုံ…။
NLD ကို မဲပေးဖို့သာဆော်သြနေတာ တကယ်တော့ မဲစာရင်းစစ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးနေသလားလို့။
ကျေးဇူးပါ ဇီကလေး နဲ့ အစ်မအေး။
ကျွန်မ သူငယ်ချင်း မြို့နယ် အတွက် တော့ စိတ်ချရမယ်ထင်ရဲ့။
ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ နယ် တွေ က သူတို့ အခံ လူ ကို အထင်မကြီး တာ၊ မကြိုက်တာ တွေ လဲ ရှိနေတယ်။
ဒါကြောင့် အနေနဲ့ သိပ် အနိုင်တွက် ထားလို့ မရဘူး။
သူ့ အတွက် နီ လော် ပေးလိုက်။
သများ ကြုံလို့ ပြောရရင် – အရင် မြန်မာပြည် မှာ လုပ်တုန်း က အလုပ် အတွက် တီဗီ ထဲ ကြော်ငြာ ထည့်ဖို့ ရိုက်တယ်။ ကျွန်မ က စီစဉ်သူ ဖွဲ့ဝင်ပေါ့။
အာ့ကို ဒါရိုက်တာကြီး က ကျွန်မ ကို လဲ ဝင်ရိုက်မလား မေးတယ်။ ဟိ။ (ကြွားဗျစီ – ဘယ်သူသိတာလိုက်လို့)
ဟင့်အင်း ပေါ့။ ကျွန်မ က အပြစ်ရှာ အင်မတန် လွယ်သူမို့ ကိုယ့် မျက်နှာရဲ့ အားနည်းချက် တွေ သိပြီး မို့ ကင်မရာ ရှေ့ ဝင်ဖို့ ကြောက်ပါတယ်။
တီဗီ ပေါ်ရောက်တာ နဲ့ အပြင်မှာ နေတာထက် ပိုပြီး အဝေဖန်ခံ ရတော့ မှာ။
ကျွန်မ ကို ရုပ်ဆိုးတယ်ပြောရင် မကြိုက်ဘူး။
တကယ်တော့လဲ သူများ အပြစ် တွေ ဘဲ ရှာပြီး ပြောရတာ ပိုပြီး ကောင်း၊ ပိုပြီး လွယ် တာမဟုတ်လား။
အခု မဲစာရင်းစစ်ဖို့ ကို တော်တော်လေး လှုံ့ဆော်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အများစု က လုပ်နိုင်သူတွေ လုပ်ကြပါတဲ့။
ဒီလို နဲ့ အစိုးရကောင်း ကို ရဖို့ လမ်းမရှိပါ။
သူ့လို အခံကောင်းကောင်း ရှိတဲ့ နေရာမှာ တစ်ဖက်က လူကောင်း တွေ သိပ်မထည့်ဘူး။
ကျွန်မ အဒေါ်တွေ ဆီမှာတော့ ဒီချုပ် က အစုတ် မှာ ဝင်ပြိုင်မှာက ဒုဝန်ကြီး တဲ့။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်နေရာတွေချပေးသွားသူထဲ.. ဦးရွှေမန်းက.. ပါတီဥက္ကဌ.. ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ေ၇းဥက္ကဌအနေနဲ့.. သေသေချာချာစီစဉ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်..။
အမှတ်မမှားရင်.. ဒေါ်စုနယ်မှာ.. ဒေါ်စုပြိုင်ဖက်က.. ဘွဲ့မရဖူးတဲ့..၁၀တန်းအောင်လူရွယ်တယောက်..
အဲဒီအတိုင်းပဲ.. ဦးရွှေမန်း ဖြူးနယ်မှာဝင်မယ့်.ဒီချုပ်ကအမတ်လည်း.. အကောင်းစားကြီးလို့.. တယ်မထင်..။
ကြည့်ရတာ.. စု-မန်း ညှိလိုက်တာမှာ.. တဖက်ဖက်က.. တော်တော်ထိသွားပုံပေါ်ပါတယ်..။
အဲဒီမူလဦးတည်ရာကို ခေါင်းဆောင်တွေ.. ညှိနှိုင်းပြီးပြန်တွန်းတင်နိုင်ရင်.. တိုင်းပြည်ကောင်းလာမယ်.. ထင်..။
တိုင်းပြည်ကောင်းလာဖို့က… တပ်ကိုလည်း ပစ်မရ.. မပစ်သင့်…။
ဦးမင်းအောင်လှိုင်သမ္မတ…။ ဒေါ်စုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့.. ၀န်ကြီးနေရာတွေကို.. ပါတီ၂ခု.. တ၀က်စီလောက်မျှယူ.. ညွှန့်ပေါင်းဖွဲ့နိုင်ရင်.. တော်တော်ဟုတ်သွားမယ်လို့.. ထင်..။
ဖြစ်ခဲ့ ရင်တော့ .. တိုင်းပြည်ငြိမ်မယ် ..
ဇင်ဘာဘွေ လိုတော့ဖြစ်နေမယ်….Robert Mugabe သူ့ အတိုက်အခံ Morgan Tsvangirai ကို
၀န်ကြီးချု ပ် ရာထူးပေးပြီး ဘာမှအလုပ်မဖြစ်သလို လဲ ဖြစ်နေနိုင်တယ်..
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ ထားရာနေ စေရာ သွားမဲ့ သူတော့ ဟုတ်မယ်မထင်ပါ ကထူးဆန်း ရယ်။
အိန္ဒိယ မှာ ဝန်ကြီးချုပ် က သမ္မတ ထက်ပိုပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် ပါဝါ ကြီး တာရော။ :-)))
Officially announced ….
. ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း
(နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်၊ ညနေ ၆ နာရီ).
၂။ ပေါက်ခေါင်း မဲဆန္ဒနယ်
ဒေါ်နီနီဒွန်း (NLD) – ၃၉၈၀၇ မဲ
မ​လော်​ဘူး ဆိုတာကိုက ​လော်​လိုက်​တာပါပဲ